နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ လူမှုရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ပေးဆပ်မှုများကို တစ်ဖက် တလမ်းမှ အားပေးကူညီလှူဒါန်းမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ် မနားတမ်းပံ့ပိုးမှု ပြုလုပ်ပေးသူများအနက်မှ ဂီတပညာရှင်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍသည်လည်း အရေးပါလှသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ပေးဆပ်မှုများ၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၏ ဖေးမမှုများကို သဒ္ဒါပေါက်၍၄င်း၊ တစ်ဖက်တလမ်းမှ အားပေးခြင်းဖြင့်၎င်း လာရောက်၍ လှူဒါန်းကြသော ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အလှူရှင်များအား ပြန်လည်၍ ဂုဏ်ပြုပေးအပ်သော ဂုဏ်ပြုလွှာနှင့်တကွ အသင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖော်ပြထားသော VCD, DVD အခွေချပ်များတွင် ကြည့်ရှုသူ ပြည်သူအပေါင်း အတွက် သီဆိုဖျော်ဖြေပေးထားသော လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သော ဂီတစကားလုံးများ ပါဝင်သည့် သီချင်းသံစဉ်များအားစတင်၍ သီဆိုဒါနပြုခဲ့သူ ဂီတပညာရှင်များတွင် အဆိုတော် မေခလာ (မငယ်)သည်လည်း အဓိကနေရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ တေးရေး/ဆို စိုးသိင်္ခနှင့် မေခလာတို့၏ နောက်ပိုင်း အဆိုတော် နှင်းဧကရီ၊ ကိုစိုးပိုင်၊ မမေရွက်ဝါ၊ အနဂ္ဃ၊ ဂျေမီ၊ ချစ်စိုး၊ ချမ်းအေးဝင်း၊ ချိုချို၊ RT(အာတီ)၊ ဘိုလေးနှင့် ပြည်သာ၊ ဂျီတုန်း၊ သုတ(Cyclone)၊ ကျော်သူ၊ ကိုရဲလွင်(မဇ္ဈိမလှိုင်း)၊ ကိုနေ၀င်း(မောင့်လပြည့်ဝန်း)၊ ဆောင်းဦးလှိုင်၊ သားထွေး၊ ကောင်းပြည့်၊ ကျားပေါက် (Big Bag)၊ အလင်္ကာ၊ နိုင်ဇော်(Lazy Club)၊ ဖြိုးကျော်ထိုက်၊ BK, JJ, P-XI, DICE, Feat - K လေး၊ ရည်မွန်လမင်း၊ စောသဉ္ဇာ၊ တွတ်ပီ(NES)၊ Po Po၊ ပိစိ၊ သူရိန်၊ ထက်အောင်လှိုင်၊ အိလှိုင်ဦး၊ ဖိုးဆောင်း၊ ကိုဦး၊ အော်တာ၊ DENNIS၊ ထက်ထက်စိုး၊ ဟန်လင်းအောင်၊ ဖိုးလ၊ သက်နှင်းဆက် စသည့် အဆိုတော် ဂီတပညာရှင်များကပါ ၀ိုင်းဝန်း၍ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)၏ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် အများပြည်သူတို့ အယူသီးမှုပပျောက်ရေးအတွက်၎င်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တို့ စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာရန်အတွက်၎င်း အားပေးအသိ အမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် တစ်ဖက်တလမ်း ဂီတပညာရပ်တို့ဖြင့် ကုသိုလ်ဖြစ် ရေး/ဆို တီးခတ်ပေးဆပ် ခဲ့ကြသည်။
ယခုဆိုလျှင် ဂီတပညာရှင်များ သီဆိုပေးထားသော လူမှုရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းများကို အလှူရှင်များအား (ကန့်သတ်) အခွေအဖြစ် ဂုဏ်ပြုပေးအပ်ရန်အတွက် အသင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပေးဆပ်မှု အရုပ်မြင်ကွင်းများအပြင် အဆိုတော်များ၏ သီဆိုမှုပုံရိပ်လွှာများပါရှိရန် သီးခြားရိုက်ကူးမှု များပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။
ထိုသို့ ရိုက်ကူးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုတော် ဦးရဲလွင် (မဇ္ဈိမလှိုင်း)၊ Hip Hop အဆိုတော် BK ( Black Night)၊ စောသဉ္ဇာတို့၏ ရုပ်ပုံလွှာများ ရိုက်ကူးပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မကြာခင်ရက်များတွင် အဆိုတော် ဆောင်းဦးလှိုင် အပါအ၀င် လူမှုရေးဂီတသမားများ၏ ရုပ်ပုံလွှာများကိုလည်း ဆက်လက် ရိုက်ကူးတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မကြာခင် အများပြည်သူ အလှူရှင်များလက်တွင်းသို့ ယင်း ဂီတလူမှုရေးသူရဲကောင်းများ၏ သံစဉ်များ၊ ရုပ်ပုံလွှာများရောက်ရှိတော့မည် ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ မိမိတို့၏ သံစဉ်များ၊ ဂီတပညာရပ်များဖြင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော အများပြည်သူ အတွက် ပေးဆပ်နေသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အတွက် ကုသိုလ်ဖြစ် သီဆိုဒါနပြုခဲ့ကြ သည့်အပြင် မိမိတို့၏ ချွေးနည်းစာ၊ မိမိတို့၏ ဂီတပညာရပ်ဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပတို့တွင် ဖျော်ဖြေ၍ ရရှိခဲ့သော ငွေကြေးအချို့ တို့ကိုပါမကျန် ကောင်းမှုပြုခဲ့ခြင်းတို့အပေါ် များစွာဝမ်းသာပီတိ သာဓု ခေါ်ဆိုလိုက်ပါသည်။ ထိုသို့ လှူဒါန်းခြင်းများသည် လှူဒါန်းမှုအတွက် ကုသိုလ်ရရှိသည့်အပြင် လူငယ် မျိုးဆက်သစ်တို့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာပါဝင် လှုပ်ရှားလိုစိတ်များပါ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ဂီတလူမှုရေးကွန်ယက်မှ အစပြု၍ လူငယ်လူမှုရေးကွန်ယက်သည် မကြာမီအချိန်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာတော့မည် ဖြစ်တော့သည်။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုကျော်သူအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, January 07, 2011
ရခိုင်အရေးကြောင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းထိခိုက် - [image: နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည်များ] နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည်များ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ သိန်းနဲ့ချီပြီး ဘင်္ဂလားဒေရ...
မြန်မာ နဲ့ Bangladesh ခရီးစဉ် အပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်အစီရင်ခံဖို့ ပြင်ဆင် - မြန်မာ နဲ့ Bangladesh ခရီးစဉ် အပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်အစီရင်ခံဖို့ ပြင်ဆင် 18 ဇူလိုင်၊ 2018 - ဒေါ်လှလှသန်း -------------------...
▼ 01/02 - 01/09 (43)
အင်းစိန်ထောင်က အကျဉ်းကျ စာနယ်ဇင်းသမား စည်သူဇေယျ စစ...
၂၀၁၀ အတွင်း ပြည်သူတွေ နဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း ( ရုပ်သံ )...
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ ခေါ်နိုင်ရေး အစီအစဉ်အဆင့် ၃ ရပ် ခ...
မြဝတီ မြို့ မှ ကားတစ်စီး ကားမိုင်ထိ
လူကုန်ကူးမှုများတွင် UNHCR နှင့် IOM ၀န်ထမ်းများ ပါ...
အော် မိန်းမ မိန်းမ ကိုယ့်တန်ဘိုးကိုယ်ရှိအောင်လုပ်တ...
Voice of Burma 795 စာစောင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခရမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ...
(၅.၁.၂၀၁၁) နေ့ကမဲဆောက်မြို့ စီတီစီ ကျောင်းတွင် ပြု...
မဲဆောက်မြို့ စီတီစီ ကျောင်းတွင်ပြုလုပ်သောကရင်နှစ်သ...
ပြည်တွင်း မှ လူငယ်များ အတွက် စိုးရိမ်သော အုပ်ထိန...
မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် ဆေးကျောင်းသား ၂၅ ယောက်...
မွန်အမျိုးသားရေးရာအဖွဲ့ ချူပ်မှ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ...
Monthly Chronology of Burma's Political Prisoners ...
၆၃နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ...
၂၀၁၀ နှစ်ချုပ် နိုင်ငံရေး အစီစဉ်များ
ကိုနေဇော်နိုင် နဲ့ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း
ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ယနေ့ကျင်းပသည့် ၆၃ န...
မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပု...
လွတ်လပ်ရေးနေ့ အောင်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နိုင်ငံရေး...
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ရှိ (UNHCR) ရှေ့တွင် ဒီေ...
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်ဆိုင်ရ...
ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက် ဆရာတော်၏ ကြွင်းကျန်ရုပ်ကလာပ်...
မြန်မာပြည်တွင်းအင်တာနက် အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းများကို...
မင်္ဂလာရှိတဲ့ တစ်လေးလုံးနေ့ .
၂၊၁၊၂၀၁၁ ဗဟိုအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ရ...
နိုင်ငံကြီးသားစိတ် မရှိဘူးတဲ့လား- လူထုစိန်ဝင်း
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် အထက်ပစ္စယံသို့ တက်ရော...
မန္တလေးမြို့ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဘီးလှိမ့်ခွန...
စိတ် ကို ပြင် ရ မှာ နော်
လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှစ်သစ်ကူး နု...